Atụmatụ mejupụtara 9 maka ị nweta foto na-enweghị atụ | Martech Zone
Nke a nwere ike ịbụ otu n'ime ezigbo foto foto foto m hụtụrụla n'ịntanetị. N'eziokwu na-ekwu okwu, M a egwu photographer. Nke a apụtaghị na enweghị m ezigbo uto. Ọ na-atụ m mgbe niile na nka dị ịtụnanya nke enyi anyị mepụtara Paul D'Andrea - ọkaibe ama ama na ezigbo enyi ebe a na Indianapolis. Anyị na-akpọ ya ka ọ rụọ ọtụtụ ọrụ ndị ahịa maka anyị ebe anyị na-eleda iji foto foto maka saịtị ụlọ ọrụ.
Na vidiyo ha kachasị ọhụrụ, AKWHKWỌ awade 9 Mejupụtara Atụmatụ maka Award-Mmeri Foto. O meela ka m chegharia foto n'ihi na dịka onye na-ese foto na-arụ ọrụ na isiokwu ya, o doro anya na onye na-ese ihe na-echekwa ndị na-ege ya ntị ka ha na-ese foto ha.
Atụmatụ ngwakọta 9
Iwu nke Thirds - Ebe isi ihe dị na ntanetị na ntanetị a na-egbutu ụzọ n'ụzọ atọ n'ụzọ kwụ ọtọ. Ọnọdụ ihe dị mkpa n'akụkụ ahịrị.
Usoro ndu - Jiri ahịrị ndị sitere na ya iji duru anya na foto a.
Diagonals - Usoro diagonal na-eme nnukwu mmegharị.
Ịkwado - Jiri eke osisi dị ka windo na ibo ụzọ.
Ọgụgụ na ala - Chọta ọdịiche dị n’etiti isiokwu na ndabere.
Jupụta ụba - Biaru ndi gi isi nso.
Nnukwu Anya Anya - Debe anya kacha na etiti foto ahụ iji mee ka a mata na anya na-eso gị.
Patkpụrụ na Nkwughachi - ternkpụrụ dị mma n'anya, mana nke kachasị mma bụ mgbe emebiri ụkpụrụ ahụ.
Symmetry - Symmetry na-amasị anya.
Ikekwe ndụmọdụ kachasị mma nke Steve McCurry nyere bụ na iwu ga-emebi ma chọọ ụdị nke gị.
Mara: Anyị enweghị ikikere ịkekọrịta foto - yabụ kpachara anya pịa site na post a ikiri vidiyo ahụ ma ọ bụrụ na ịchọghị ya n'elu. Aga m agba gị ume ịbịakwa Ebe nkiri Steve McCurry werekwa ọrụ dị egwu ọ rụpụtara kemgbe ọtụtụ afọ.
Tags: etiti akara anyamejupụtaracoophdiagonalsọgụgụ ka alajupụta etitinhazina-eduga akarausoro na ikwughachiFotoAtụmatụ fotoọchịchị nke otu ụzọ n'ụzọ atọSteve McCurrysymmetry
Jun 7, 2016 na 12:39 AM
Douglas Karr kwesịrị ịrụkọ ọrụ ọnụ na Steve McCurry